China 2W CDMA800MHz ebanzi band wireless Repeater umzi-mveliso kunye nabavelisi | Kingtone
Intshayelelo yeSicelo esiPhambili kunye neemeko zeNkcazo yaMacandelo/Iwaranti yeKingtone Repeaters inkqubo yenzelwe ukusombulula iingxaki zomqondiso obuthathaka ohambahambayo, onexabiso eliphantsi kakhulu kunokongeza iSikhululo esitsha (i-BTS) .Ukusebenza okungundoqo kwe-RF Repeaters inkqubo kukufumana umqondiso wamandla aphantsi ukusuka kwi-BTS nge-BTS nge-BTS. Usasazo lwamaza kanomathotholo emva koko lusasaze isignali eyandisiweyo kwiindawo apho unxibelelwano lwenethiwekhi lunganelanga. Kwaye isiginali yeselula nayo ikhulisiwe kwaye idluliselwe kwi-BTS vi...
Kingtone Ukuphindas inkqubo yenzelwe ukusombulula iingxaki zesiginali ephathwayo ebuthathaka, enexabiso eliphantsi kakhulu kunokongeza iSikhululo esiSiseko esitsha (BTS) .Ukusebenza okuphambili kweRF Ukuphindas inkqubo kukufumana umqondiso wamandla aphantsi ukusuka kwi-BTS ngosasazo lwamaza kanomathotholo kwaye emva koko usasaze umqondiso owandisiweyo kwiindawo apho unxibelelwano lwenethiwekhi lunganelanga. Kwaye isiginali yeselula nayo ikhulisiwe kwaye idluliselwe kwi-BTS ngendlela echaseneyo.
◇ Ijika elibukhali lokucoca
◇ UkuSebenza okuzenzekelayo ukusebenza ngokufanelekileyo
I-gsm 850Mhz ii-aplikeshini zokuphinda ii-wireless
Ukwandisa ukugutyungelwa komqondiso wophawu lokuzalisa indawo eyimfama apho umqondiso ubuthathaka
Ngaphandle: Izikhululo zeenqwelomoya, iMimandla yoKhenketho, iiKhosi zeGalufa, iitonela, iifektri, iZithili zeMigodi, iiLali njl.
Ngaphakathi: Iihotele, amaZiko eMiboniso, amagumbi angaphantsi, iivenkile
Iivenkile ezinkulu, iiOfisi, iiNdawo zokuPakisha njl.
Isetyenziswa ikakhulu kwimeko enjalo:
Umntu ophindayo unokufumana indawo yofakelo enokufumana isignali ecocekileyo ye-BTS kwinqanaba elinamandla ngokwaneleyo njengoko iNqanaba le-Rx kwindawo yokuphindaphinda kufuneka ibe ngaphezu kwe- -70dBm;
Kwaye inokuhlangabezana nemfuneko yokuzahlula kwe-antenna ukunqanda ukuzibamba.
IsiPhumo seSibizo saMandla-5dB
Imposiso yesiGaba esiPhakamileyo(°)
Imposiso yeSigaba se-RMS (°)
Inzuzo Uluhlu loLungiso(dB)
12months iwaranti yomntu ophindayo . 6months ukwenzela izincedisi
*Umzekelo : KT-CRP-B25-P45-B
*Udidi lweMveliso : 30W CDMA800MHz iAmplifaya yaMandla aPhakamileyo uMgama omde uFundo oluKhethayo lwangaphandle lwe-Booster Band
*Umzekelo : KT-CPS-400-03
*Udidi lweMveliso: 400-470MHz 3 Way Cavity Splitter
*Udidi lweMveliso : Yagi Antenna
* Udidi lweMveliso: i-lte repeater band4 network booster 4g mobile signal booster 2600
3g 4g Lte Isiphinda
I-4g ye-Signal Booster
I-Gsm yoMgama omde wokuphinda
2W CDMA800MHz Air Coupling Frequency Shifting R...
30W CDMA800MHz iAmplifaya yaMandla aPhakamileyo kumgama omde...
Amandla aphezulu 43dBm 20W CDMA800MHz Ukukhetha ibhendi ...
37dbm 5W GSM850Mhz isignali yeselfowuni yeSelfowuni Band Select...